Kamel, a nnọọ oru oma n'aka iga | Njem zuru oke
Daniel | | Egypt
Kemgbe oge ochie, ikekwe n'ihe dị ka afọ 3.000 gara aga, ụmụ mmadụ na-eji ya camel dị ka ụzọ ụgbọ njem dị mma na mpaghara ụfọdụ nke ụwa.
Animalsmụ anụmanụ ndị a nwere anụ ọhịa a ma ama maka abụba nkwụnye ego (humps) nke na-esite n'azụ ya pụta, mmadụ bụụrụ ya ụlọ ọtụtụ puku afọ gara aga. Ha abụrụla, ma bụ, isi iyi nri (mmiri ara ehi na anụ), ebe ejirila akpụkpọ ahụ ha mee uwe. Mana nke kachasị, ojiji ya kachasị mkpa bụ ụzọ eji eme njem. Daalụ niile ha akpan akpan mmewere, akpan imeghari ka ebe obibi desert.
1 Olee ụdị kamel ole?
2 "Gbọ mmiri nke ọzara
3 Kamel dị ka ngwa ọgụ
Olee ụdị kamel ole?
Agbanyeghị, ekwesiri iburu n’uche na obughi kamel niile di n’uwa ka eji eme njem. Ha di n'uwa ụdị atọ nke kamel:
Bactrian kamel (Camelus bactrianus), emi odụn̄de ke Central Asia. Ibu na ibu karịa ụdị ndị ọzọ. O nwere okpukpu abụọ ma akpụkpọ ahụ bụ ajị anụ.
Anụ ụlọ bactrian (Camelus ferus), nakwa na humps abụọ. O bi na nnwere onwe na mbara ọzara Mongolia na mpaghara ụfọdụ nke ime China.
Kamel ndị Arab o Dromedary (Camelus dromedarius), ụdị ndị kachasị ewu ewu na ọtụtụ, yana ọnụ ọgụgụ ụwa bi na 12 nde. Ọ nwere otu hump. A na-ahụ ya na mpaghara Sahara na Middle East. Ebuputela ya na Australia.
A kamel nwere ike iru ọsọ nke na- 40 kilomita kwa awa na nwere ike iguzogide ogologo oge n’etinyeghị otu ndapụ mmiri. Dromedary dị ka ihe atụ nwere ike ibi ndụ n'ụzọ zuru oke na-a drinkingụ otu ugboro kwa ụbọchị 10. Iguzogide ya na-ekpo ọkụ dị oke egwu: ọ nwere ike ịdị ndụ na mbara ọzara kachasị njọ ọbụlagodi mgbe ọ tufuru ihe ruru 30% nke oke ahụ ya.
Bactrian na-a drinkingụ mmanya
Kedu ka anụmanụ ndị a si enweta obere mmiri? Ihe nzuzo dị griiz na-agbakọta na mkpumkpu ha. Mgbe ahụ́ kamel chọrọ hydration, a na-eme ka abụba ndị dị abụba dị n’ebe ndị a na-amịkọrọ mmiri, na-ewepụta mmiri. N’aka nke ọzọ, akụrụ na eriri afọ gị nwere ikike dị ukwuu nke ime ka mmiri dịghachi ọhụrụ.
Mana nke ahụ apụtaghị na kamel ga-ebi n’enweghị mmiri. Mgbe oge ruru mmiri, kamel 600 nke okenye toro eto nwere ike ị drinkụ ihe ruru lita 200 n'ime naanị nkeji atọ.
"Gbọ mmiri nke ọzara
Nnukwu iguzogide akpịrị ịkpọ nkụ na ikpo ọkụ, nke na-agaghị ekwe omume ịchọta n'ọtụtụ anụmanụ, na-ekpu anụ ọhịa a okpueze ezigbo enyi mmadu ibi na ozara.
Ruo ọtụtụ narị afọ, ndị njem Ndị ahịa jiri kamel gafere nnukwu ọzara. Ekele dịrị ya, ụzọ azụmahịa na ọdịbendị na kọntaktị nwere ike ịmalite nke gaara agaraghị ekwe omume ma ọ bụghị ya. N’echiche a, ekwesiri iburu n’uche na kamel abụrụla isi ihe butere mmepe ọtụtụ obodo mmadụ na Asia na North Africa.
Ọ bụrụ na ọzara ahụ bụ oke osimiri nke ájá, kamel bụ nanị ụzọ a ga-esi na-agagharị na ya na nkwa nke iru ọdụ ụgbọ mmiri dị mma. N'ihi nke a, a maara ya nke ọma dịka "Hipgbọ mmiri nke ọzara".
Caragbọ njem kamel na-agafe n’ọzara
Ọbụna taa, mgbe ụgbọ ala niile na GPS enweela ihe ịga nke ọma iji dochie ya dị ka ụzọ njem, kamgbe ọtụtụ agbụrụ Bedouin ka na-eji kamel ahụ eme ihe. Otú ọ dị, ọ bụ ihe a na-ahụkarị na mba ụfọdụ na ọrụ ọhụụ dị ka njem nlegharị anya karịa dị ka ụgbọala.
Ọ bụ ihe nkịtị na, na njem ha na-aga ebe dị ka Morocco, Tunisia, Egypt ma ọ bụ United Arab Emirates, ndị njem nleta na-akwụ ụgwọ njem kamel gafere n’ọzara. Na ha (mgbe niile n'aka ndị nduzi nwere ahụmahụ), ndị njem na-achọ mmetụta uche na-abanye n'ókèala ndị na-adịghị mma na ndị na-adịghị mma, emesịa na-ehi n'ụlọikwuu n'okpuru mbara igwe nke jupụtara n'ọzara. Kamel bụ, mgbe niile, ihe nnọchianya nke oge echefuru echefu nke njem ịhụnanya na ihe omimi dị omimi.
Kamel dị ka ngwa ọgụ
Na mgbakwunye na arụmọrụ ya egosiri na njem, kamel ejirila kemgbe ụwa ngwa agha. Ugbua na mgbe ochie na Achaemenid Peasia Ha choputara ogo umu anumanu ndia bara ezigbo uru nagha ha: ike ya itu egwu ndi inyinya.
N'ihi ya, ike ndị dike na-atụkwasị kamel n'ọtụtụ agha ghọrọ ihe a ma ama, ihe ngwọta zuru oke iji mee ka ndị agha ịnyịnya ghara ịla n'iyi. Ọtụtụ akwụkwọ ndị mgbe ochie na-egosi ọrụ kamel na mmeri nke alaeze Lydia na narị afọ nke XNUMX BC.
Kamel na dromedaries abụwo akụkụ nke ndị agha lụrụ ọgụ na North Africa na Middle East malite n'oge ndị Rom ruo n'oge dị nnọọ anya. Ọbụna ndị agha nke United States kere na narị afọ nke XNUMX ngalaba pụrụ iche nke kamel nke o tinyere na steeti California.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Njem zuru oke » Kamel, usoro dị irè nke njem
coral sebas dijo
na ọ bụrụ na nke ahụ bụ ọzọ waveaaaaaaaaaa
Zaghachi sebas coral
sebas kwuru dijo
Zaghachi ka sebas kwuru
Nsogbu Moroccan mbụ